Admin Assistance (7)
ဂျပန်နိုင်ငံTrainning အလုပ် (1)
စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးဝန်ထမ်း (1)
mmlaylan | Anywhere | 12 နေ့ ရက် များ ကြာခဲ့ပြီ။
mmlaylan| Anywhere| 12 နေ့ ရက် များ ကြာခဲ့ပြီ။
May Stars International | JP | 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
May Stars International| JP| 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
ပိုင်စိုးအထည်ဆိုင် | TGY | 12 နေ့ ရက် များ ကြာခဲ့ပြီ။
ပိုင်စိုးအထည်ဆိုင်| TGY| 12 နေ့ ရက် များ ကြာခဲ့ပြီ။
May Stars International | JP | 25 နေ့ ရက် များ ကြာခဲ့ပြီ။
May Stars International| JP| 25 နေ့ ရက် များ ကြာခဲ့ပြီ။
YouCan JP | TKY | 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
YouCan JP| TKY| 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
Mingalaba | MM | 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
Mingalaba| MM| 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
Myanmar Job Searchers | YGN | 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
Myanmar Job Searchers| YGN| 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
၀င်းစာပေ | YGN | 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
၀င်းစာပေ| YGN| 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
24autocenter | YGN | 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
24autocenter| YGN| 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
၀င်းစာပေ | PTN | 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
၀င်းစာပေ| PTN| 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
May Stars International | YGN | 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
May Stars International| YGN| 1 လ ကြာခဲ့ပြီ။
Blogger ကံပွင့် | TH |2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
၁၀၀၀၀ ဘတ် / လ
ရုံးစာရေး - ကျား ၊ မ ၁ ဦး စာရေးတတ် ပြီး ဖတ် တတ် ရမည်။ ထိုင်းတွင် နေ ထိုင် ပြီး ထိုး စကား ပြော နိုင် သူ ကို သာ ခန့် ထား မည်။ VISA ကို တာဝန် မယူ နိုင် သော ကြောင့် နေထိုင် ခွင့် ရသူ သာ လျင် ခန့် ထား ပါ မည်။ နေရာ ၊ Mae Sai စိတ် ဝင် စား လျင် ဒီိ က လျောက် ပေး ပါ။ ဖုန်း လည်း ဆက် ရပါသည်။
Blogger ကံပွင့်| TH|2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Full time ၁၀၀၀၀ ဘတ် / လ
PC စာရေး ဆရာ
Blogger ကံပွင့် | Anywhere |2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
၁ သောင်းကျပ် / A4 pa
ကျွန်ုပ်ရေးသားနေ သော စာအုပ်စာပေ များ ကို ကွန်ပျူ တာ တွင် Microsoft Word ဖြင့် ရေး သားသာ A4 paper ဖြင့် ပေး အပ် သော Template တွင် Font size 14 ဖြင့် မြန်မာ ၊ Englishေ၇း သား တတ် သူ ကို အလိုရှိပါသည်။ မိမိကိုယ် ပိုင် PC ရှိလျင် ပို ကောင်း ပါ၏။ လိုအပ် လျင် အသံInterview mp3 ဖိုင်များ ကို နားထောင် ကာ စာ ပြန် ရေး ပေး ရပါမည်။ ကျောင်းသားများ ကို အထူး ဦး စား ပေး လျောက်ထား စေ လို သည်။ ဖုန်း ကို ဆက် ပြီး သော် လည်း ကောင်း ၊ ဒီ နေ ရာ က သော်လည်းကောင်း လျောက် ထား ပေး ပါ။
Blogger ကံပွင့်| Anywhere|2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Part time ၁ သောင်းကျပ် / A4 pa
mmlaylan | Anywhere |2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
300 $ / item sales
Hello! Everyone, who is interested in items sales on Ebay site and makes it happens. Recommend to apply for it from anywhere around the world. Must friendly with PC, excel and accounting Able to work with team and must report to Sales Manager Decide on sales and marketing as career and happy to be working with item sold out Culture of sales is essential and must beaself starter Payment is based on per items sales, no pay for no sales result. If interested, apply from here beapart of MmLayLan team. Want to work with you soon! MmLayLan
mmlaylan| Anywhere|2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Freelance 300 $ / item sales
Trans Auto | Asia |2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
အောက် ပါ အရည်အချင်း ရှိ သော လက်ထောက် မန် နေဂျာ အမြန် လို အပ် ပါ သည်။ ၁။ ဘွဲ့ရ ရှိ ပြီး ဖြစ် ရမည်။ Engineer ဘွဲ့ ကို ဦး စား ပေး မည်။ ၂။ အတွေ့ အကြုံ အား ဖြင့် ၂ နှစ် ဝန်းကျင် ရှိ ရပါမည်။ ၃။ ထိုင်း နိုင် ငံ တွင် အနည်း ဆုံး ၃ နှစ် အခြေချ နေ ထိုင် နိုင် ရမည်။ ၄။ NGO လုပ် ငန်း များ တွင် လုပ် ကိုင် ခဲ့ ဖူး ကြောင်း အထောက် အထား ပြနိုင် ပါ က ဦး စား ပေး စဉ်း စား မည်။ ၅။ သက် ဆိုင် ရာ ရုံးများ ကို လွယ် ကူရှင်း လင်း စွာ စီမံ ဆောင် ရွက် နိုင် သော ယုံ ကြည် ချက် ရှိ ရမည်။ စိတ် ပါ ဝင် စား ပြီး စိန် ခေါ်မှု များကို ရင် ဆိုင် နိုင် သည် ယူ ဆပါက Resume နှင့် Cover Letter ကို ရေး ပြီး ဒီ ကနေ လျောက် ထား ပေး ပါ။ Trans Auto
Trans Auto| Asia|2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Full time 700 $ / month
Trans Auto | TH |2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် အရောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ် ကိုင် ရန် အောက် ပါ ဝန် ထမ်း နေ ရာ ၅ နေ ရာ လိုအပ် လျက် ရှိ ပါသည်။ ၁။ ၁၀ တန်းအောင် ပြီး သူ - ကျား ၊ မ ၂။ အတွေ့ အကြုံရုံး လုပ် ငန်း ၁ နှစ် ရှိ ရ မည်။ (အဓိ က အဖြစ် တော့ တင် ပြစရာမလို ပါ) ၃။ နေထိုင်ခွင့် VISA ကို လို အပ် လျင် ဆောင် ရွက် ပေး မည်။ ဒီ နေ ရာမှ မိမိ CV ကို ပူးတွဲ ပြီး လျောက် ထား ပါ။ ရွေး ခြယ် မည့် သူ များ ကို ဆက် သွယ် ပါ မည်။ ကျေး ဇူး တင် ပါသည်။ Trans Auto
Trans Auto| TH|2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Full time 200 $ / month
ညစောင့် လုံခြုံ ရေး
၀င်းစာပေ | AYA |2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
၈ သောင်း ကျပ် - တစ်
ညစောင့် လုံခြုံ ရေး တာ ဝန် အတွက် အလုပ် လျောက် နိုင် ပါ သည်။ ဒီ နေ ရာ က နေ လို အပ် တာ ဖြည့် ပြီး လျောက် ပေး ပါ။ Ayawaddy တိုင်း က လူ များ ကို သာ ခန့် ထား ပါမည်။ Win စာ ပေ
၀င်းစာပေ| AYA|2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Full time ၈ သောင်း ကျပ် - တစ်
တလ - ၁သိန်း
စာ စီ စာရိုက် အမြန် အလို ရှိသည်။ ဒီ နေ ရာ က CV ကို တွဲ လျောက် ပါ (ဖုန်း ဆက် မေး သူ များ သောကြောင့်ပါ)။ နောက်လ နိုဝင်ဘာ စပြီး လုပ် နိုင် ရမည်။ Win စာ ပေ
Full time တလ - ၁သိန်း
မွေးမြူ ရေး အကူ လုပ် သား
YouCan JP | JP |2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း အလုပ်ဗီဇာ ခေါ်ယူခြင်း 熊本(kumamito) 鹿児島(Kagoshima) မှာရှိတဲ့ မွေးမြူရေးကုမ္ပဏီ ပါ ၁ယောက် ကနေ ၂ယောက် လိုအပ်ပါတယ် ဝန်ထမ်း အဖြစ်နဲ့ ခန့်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများ ဒီနေ ရာ ကနေ CV တွဲ ပြီး လျောက် ထား နိုင် ပါသည်။ Language School ပြီးပြီး ဂျပန်စာ Lecel3နှင့် အထက် ရှိသူများ ok ပါတယ် တိုက်ရိုက်ခန့်မှာပါ ပွဲစားမဟုတ်ပါ
YouCan JP| JP|2လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Full time ညှို နှိုင်း
၁၀၀၀ ယန်း / နာရီ
Misato Station(三郷駅)　မှာအလုပ်ပေါာပါတယ်၁၀ ယောက်လောက်လိုတာပါ။ Interview တာနဲ့ အဆင်ပြေရင်ချက်ချင်း ၀င်ရပါမယ်။ပိတ်ရက်မ၇ှိ။ကျောင်းသားဖြစ်ပါက ဂျပန်ဥပဒေအတိုင်း ၂၈ နာရီသာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပါမယ်။Bank ပေးပါ။Nipori Statio နဲ့ Nishinipori Station ကနေ မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲကြာပါတယ်။Misato Station ကနေ Bus Car ၁၂ မိနစ်ခန့်ကြာ ထပ်စီးရပါတယ်။ အားလုံပေါင်းကြာချိန် ၃၂ မိနစ်ခန့်သာကြာပါမယ်၊အသားတွေထုတ်ထားတဲ့အထုတ်တွေကိုしわけ　လုပ်ပေးရမှာပါ။အအေးခန်းဖြစ်တဲ့ အတွက် အအေးချိန်က5ဒီဂရီကနေ zero ဒီဂရီ အေးပါတယ်။ အလုပ်ချိန် 9:00 - 18:00 13:00 –22:00 17:00 or 18:00 – 22:00 pm or 23:00 20:00 - 5:00 (ရှင်းယ) ၁နာရီ ၁၀၀၀ ယမ်းပါ ( ရှင်းယချိန် 25 % up)ရထား၊ကားခ အားလုံးပေါင်း( အသွားအပြန်အပီးအစီး ၁၃၀၀ ယမ်းထိ ပေးပါတယ်)အအေးခန်းဖြစ်တဲ့ အတွက်တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူ အအေးခံနိုင်တဲ့သူမှ ပြောပေးပါ။အနွေးထည်ကိုယ့်အစီစဉ်နဲ့ကိုယ်ဝတ်လို့ရပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပါက နာမည်၊Visa အမျိုးအစား၊နေထိုင်သည့် ဘူတာနာမည်၊ဖုန်းနံပါတ် လုပ်ချင်သည့်အချိန် ကို စာရွက်တွင်ရေးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ ပို့ ပါ။(မိတ်ဆက်ခ ပေးရန်မလို)အပြည့်အစုံဖော်ပြထားတဲ့ အတွက်သေချာဖတ်ပီးမှ မေးပေးပါ။ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာနှင့်မသက်ဆိုင်ပါက Reply လုပ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Part time ၁၀၀၀ ယန်း / နာရီ
24jobcenter.com © 2017　Sponsored by May Stars International Company